လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးကြပါစို့-၁ ( ရတနာပုံ ဂေဇက် ) ( မြန်မာ့ကြေးမုံ)(mirror) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးကြပါစို့-၁ ( ရတနာပုံ ဂေဇက် ) ( မြန်မာ့ကြေးမုံ)(mirror)
လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးကြပါစို့-၁ ( ရတနာပုံ ဂေဇက် ) ( မြန်မာ့ကြေးမုံ)(mirror)
Posted by ေၾကးမံု on Jan 24, 2011 in Education, Environment | 8 comments
ကျမရဲ့ထိုက်သင့်တဲ့ စာတွေ့ လေ့လာမှု၊ကိုယ်ပိုင်ဘဝအတွေ့ အကြုံ၊များ မှ့
ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ် ခံယူချက်များကိုအခြေခံပြီး ဒီ forum ကို
အရင်ဆုံး ကျမတို့ ချစ်တဲ့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးအကြောင်းကို အကြမ်းဖျင်း
အရှေ့တောင် အာရှ မှာ အကြီးဆုံး နိုင်ငံတစ်ခု့ဖြစ်တယ်။
မြောက်ဘက်မှာ အမြင့်ဆုံး ခါကာဘိုရာဇီ (၅၈၀ဝ မီတာ ကျော် ) ရေခဲတောင်ကြီး၊နဲ့
ကျွန်းစိုက်ခင်း၊ကျွန်းတောများနဲ့ အတူမေခ၊မေလိခမြစ် ။ ဧရာဝတီမြစ်ဖျားပိုင်း
ကျေက်စိမ်း၊နီလာ၊ပတမြား၊ရောင်စုံ ကျောက်မျက် ရတနာ အဖိုးတန်တွင်းများ။
် ဧရာဝတီလင်းပိုင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ ငါးမျှှားနေတဲ့ တံငါရွာတွေ။
ငပလီ ကမ်းခြေရဲ့သဘာဝအလှတရားဟာ အင်ဒိုနီးရှား
မြောက်ဦးမြို့ဟောင်းရဲ့( ၁၆-၁၇-၁၈ ရာစု )
အရှေ ့ဘက်ကို တစ်ချက်လောက်ငဲ့ကြည့် ရင်
သံလွင် ရယ် မင်းလဲတို့တွေကို အကျိုးပြု နေဆဲဘဲလေ။
သဘာဝအင်းလေးကန်ကြီးရဲ့အလှနဲ့ တန်ဖိုးကို အင်းသားတွေကပိုပြီးသိပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး၊ဂေါ်ဖီထုပ်၊ပန်းမုန်လာ၊ဂျင်း၊နနွင်း ၊ကြက်သွန်ဖြူ ၊
အာလူး၊ပန်းနှမ်း၊သနပ်ဖက်၊လက်ဖက် စတဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုက်ခင်းများ၊
Cambodia အန်ကောဝပ် ကျောင်းကြီးနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ဗိသုကာပညာရှင်များလက်ဖျားခါ
၄၂ ကီလိုမီတာ အကျယ်အဝန်းရှိတဲ့ မြေပေါ်က (၁၁-၁၃ ရာစု့ ) ပုဂံ
သရပါတံခါး၊အုတ်မြို ့ရိုး အတိအကျရှိခဲ့တဲ့ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး။
မန်းတောင်ရိပ်နဲ့ အတူ ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတဲ့ 19 ရာစု ကတည်ဆောက်ခဲ့ တဲ့ မန္တလေးရ
တနာပုံ ( မြို့ရိုး နဲ့ ကျုံး )
ကမာ္ဘ အကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးလို့ တင်စားရတဲ့ ကုသိုလ်တော်ဘုရား၊
၁၈၀၈ ခုနှစ်က အလေးချိန် တန် ၉ဝ ရှိတဲ့ မင်းကွန်း ခေါင်းလောင်းကြီး နဲ့
အမရပူရ တောင်သမန်းအင်း နဲ့ ဦးပိန်တံတား၊
(၁၆-၁၈ ရာစု ) အင်းဝမြို့ဟောင်း နဲ့ စေတီပုထိုး ဘုရားကျောင်းကန်တွေ၊
ချန်လှပ်ထားခဲ့လို့ မရတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးနဲ့ စေတီပုထိုး
ချင်းတွင်း အစထား လို့ ဧရာဝတီ ရဲ့မြစ်လက်တက် နဲ့မြစ်ခွဲပေါင်းများစွာ။
သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်း ရှေးဟောင်း ပျု လူမျိုး နဲ့ ပျု ယဉ်ကျေးမှု၊
ဝိတိုရီယဘုရင်မ လက်ထက် စစ်ကြိုခေတ် ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံ
အမိတိုင်းပြည်စပါးကျီလို့ တင်စားနိုင်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊
ငွေဆောင် နဲ့ ချောင်းသားကမ်းခြေသဘာဝအလှတရားများစွာ၊
ထူးဆန်းဖွယ် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား၊နဲ့ မွန်တို့ ဌာနီ ၊
ဇွဲကပင် နဲ့ ၊မုတ္တမ ပင်လယ်
ရေနံ နဲ့ သဘာဝ ဓတ်ငွေ့ တွေ၊
ပင်လယ်ဂျစ်ပစီလို့ ခေါ်နိုင်တဲ့ ဆလုံလူမျိုးစု့ ၊ ငှက်သိုက်၊
ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း အရှည် ၂၈၀ဝ ကီလိုမီတာ ကျော် နဲ့ ကျွန်းစု့လေးပေါင်းများစွာ၊
ယူရေနီယံ လဲတွေ့ နေပြီဆိုလား။
မြန်မာပြည်ရယ် ရှင့်ကို ဘယ်နေရာကကြည့်ကြည့်
သဘာဝသံယံဇာတများစုံလင်လို့ အရိုင်းဆန်စွာ တကယ်လှပ တယ်နော်၊၊
ဒီလိုသိပ်လှပလွန်း တဲ့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးကို
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များဟာပညာရှာ ၊ စိတ်ကိုခွန်အားဖြည့် အဟာရကျွေး၊
သူတို့တွေ လက်တဲမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ် / idea ကောင်းတွေ။
အကောင်းအဆိုး။အကျိုးအပြစ် တွေ။ ကို ခွဲခြား စိတ်ဖြာဝေဖန်နိုင်စွမ်းတွေ ရှိ ရ
မယ်။ ရှိ လိမ့်မယ်။
သင့် ရဲ့သိပ်ပြီးလှပတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ယဉ်ကျေးဖော်ရွေပျုဌာတဲ့ လူမျိုး ကို
အမိမြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကမ္ဘာ နဲ့ တကယ်ရင်
အသိမှန် ၊အတွေးမှန်၊အမြင်မှန် ၊ တွေရလာအောင်၊ လူတောတိုးလူရာတကယ်ဝင်လာအောင်
ကျမတို့အားလုံး ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ ။
တချို့ အကြောင်းအရာ တွေ ကို စာသင်ကျောင်း ၊ တက္ကသိုလ်၊ တွေမှာ မသင်ခဲ့ ရပါဘူး၊
ကျမတို့ အသေးအဖွဲ အခြေခံ အချက်လေးတွေ က အစစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
လူတစ်ဦးခြင်းစီ လိုက်နာကြမယ် ဆိုရင်
ကျမတို့တွေမှာ အားနည်းချက်တွေရှိ့ ခဲ့ ရင်လဲ နောက်ကျတယ်မရှိ တဖြေးဖြေးနဲ့
ပြုပြင် သွားလို့ရ ပါတယ်မဟုတ်လား။
ကျမတို့ က နည်းပြ လမ်းပြ စနစ် ကောင်းပါမှ့ ကျမတို့ရဲ့မျိုး ဆက်သစ်
တွေ က ကျမတို့ ကို အပြစ်တင်ခံရ နဲ နိုင် မယ်မဟုတ်လား။
လူတွေ ဟာ သဘာဝ တရား။စိတ်ဓာတ်။ ခံယူချက်။ဝါသနာ။ဗီဇ။တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်
မတူနိုင်တာကိုတော့ မညှို နှိုင်းလိုပေမဲ့ တစ်ချို့ကိတ်စ တွေ မှာ
လွယ်လွယ်နဲ့ ပြင်လို့ ရ တဲ့ ကိတ်စ မျိုးတွေ ကိုတော့ ပြင်သင့်ပြီ။
မြန်မာရွှေ နိုင်ငံသားတွေ ရွှေ ရောင်အဆင်းနဲ့ အလှဝန်းစေဖို့
ကျမ ပထမဆုံးဆွေးနွေးချင်တဲ့ အချက်ကတော့
၁။ အမှိုက်များကို လက်လွတ်စပယ် နေရာတကာ လွှင့်ပစ်တာမျိုး။ ( လုပ်သင့်သလား၊
( အမှိုက် ( စက္ကူ တစ်ရှုး။ကြွတ်ကြွတ်အိတ်။ရေသန့်ဗူးခွံ။စားပြီးသားမုန့်အခွံ
ကွမ်းတံတွေးထွေးတာ/ သလိပ်ဟပ်တာ/ ဆေးလိပ်တိုပစ်တာ ) အဆုံး။ လွယ်လွယ်ကူကူ ။
စည်းမရှိ။ကမ်းမရှိ လွှတ်ပစ်သင့်လား။ထွေးသင့် ပါသလား.။)
အမှိုက်ပုံးရှာပြီး အမှိုက်ပုံးထဲကို စနစ်တကျ တည့်တည့် မတ်မတ် မပစ်သင့်ဘူးလား။
ကွမ်းကြိ ုက်တတ်တဲ့လူကလဲ အမှိုက်ပုံးရှာထွေး။ဒါမှ့ မဟုတ်ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ဆောင်
အဲ့ဒီ့ လို နေရာတကာမှာ ပြစ်ချင်သလို ပြစ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးမျိုးကို
ဖျောက်ပြစ် ဖို့ ကောင်းနေပြီ လို့ ကျမကတော့ ယူဆတယ်။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးကော ဘယ်လိုယူဆပါသလဲ။ ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က စည်ပင်ကိုသန့်ရှင်းရေးခွန် ပေးထားပြီးသားလေ။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက စည်ပင်ကို ပိုက်ဆံပေးထားတာ ပဲ
သူတို့သိမ်းမှာ ပေါ့ဆိုတဲ့ အတွေးေ တွ ပြင်သင့်ပြီ။
စည်းကမ်းရှိရင် စည်ပင်လည်း အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး အမှိုက်လိုက်သိမ် းမနေဘဲ
တခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မ ယ်။
ဒီလိုမျိုးစည်ပင်ကို တွယ်ကပ်ပြီး မိမိ အမူအကျင့် ကိုမပြင်ဘဲနေမလား။
မိမိတင်မကဘဲ မိမိနဲ့ ပတ်သက်ရာ ချစ်သူ.။ခင်သူ။တွယ်တာသူတွေ။မိသားစု့ ။
အမူအကျင့်တွေ ကို စတင် ပြင်သင့်ပြီလို့ မယူဆဘူးလားမေးချင်မိပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ။ အမှိုက်ကို လက်လွတ်စပယ်ပြစ်တော့ ဘာတွေ အကျိုးဆက်ရလဲ။
အစေ့ချတိုင်းအပင်ပေါက်တဲ့ အမိမြန်မာပြည် စိုက်ပျိုးရေး နိုင်ငံ အတွက်
ပလတ်စတစ် အိတ်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မဆွေးမြေ့ဘဲ မြေဇီလွှာကို
် နောင်လာနောင်သားတွေ က ကျမ တို့ သေပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကျမ တို့ ရဲ့အုတ်ဂူ
သေးနဲ့ လာပန်းနိုင်သလို ။ကျမတို့ ကို ကျိန်ဆဲ နိုင်သေးတယ်နော်။
ကျမတို့ ဘိုးဘွားဘီဘင် လက်ထက်က အင်ဖက်။ငှက်ပျော်ဖက်တွေ ကို သုံးခဲ့ တာ။
ဆွေးမြေ့လွယ်တာ။ မြို့နေ လူဦးရေ လဲ သိပ် မများသေးတာဆိုတော့ အမှိုက်ရဲ ့
မသိသာပေမဲ့ အခု့ ကတော့ အလွန် သိသာလာပါပြီ။
အမှိုက်တွေဆို့ လို့ ရေမြောင်းတွေ ပိတ်။ရေတွေ လျှံ။မြေကြွက်တွေ သောင်းကျန်း။
အနံ့ ဆိုးတွေ နဲ့ ။
တစ်ချို့ဆိုရင် စီးလာတော့ ကားအကောင်းစား သိန်းထောင်ချီတန် . ဖတ်ကနဲ
ကားနဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ အမူအကျင့်။
ဂေါက်ကွင်းလို နေရာမျိုးမှာလဲ ရေသန်းဗူးခွံ တွေများ ပစ်ချထားလိုက်တာ
ဂေါက်ရိုက်လာတဲ့ လူတန်းစားနဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ အမူအကျင့်။
ရန်ကုန်မြို့က တိုက်ခေါင်းမိုးတွေ ပေါ် / နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေ/ အိမ်ရှေ ့
ဆိုရင်လဲ မြင်မကောင်းရှု မကောင်း ။ရန်ကုန်မြို့တင်မကဘူး။ နယ်တွေမှာလဲ
ဒါတွေ ဟာ လူ တစ်ဦးခြင်းစီ က ပြုပြင်ရမဲ့ အမူ အကျင့် တွေ လေ။
ဒီလို ပုံစံ မျိုးတွေ ဆက်လုပ် နေ မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ နဲ့ ဘယ်လို ရင် ဘောင်
Zero quarter/miniskirt / နဲ့ ကိုရီးယားလှိုင်းလေးတွေကြားမှာ
ဂျင်းဘောင်းဘီ ၊ ဝတ်တတ်ယုံနဲ့ ခေတ်မီသွားပြီလို့ ထင်နေပါသလား။
နိုင်ငံတကာမှာ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ပြီလို့ ထင်မိပါသလား။
ကောင်းသော အမူ အကျင့် မှန် သမျှ ကို သင်ယူသင့် တယ်လို့ ယူဆခဲ့ ရင်
ဒီနေ့ ကစပြီး အိမ်မှာဘဲ အမှိုက်ပုံး ၂ ပုံး ( အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းတစ်ခု့။
နောက်ဘေးမီးဖိုချေုာင် တစ်ခု့ )
သန့်ရှင်းပါတယ်။စည်းကမ်းတင်းကြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Singapore လိုနိုင်ငံ
မြန်မာအများဆုံးလာတဲ့ ပင်နီဆူလာ ပလာဇာ ဟာ
အညစ်ပတ်ဆုံးလို့ ပြောလို့ ဝေဖန်လို့ ရတယ်ဆိုတာ Singapore ကို မစိမ်းတဲ့ သူ
တိုင်း သိမှာ ပါနော်။
ကျမ တို့ ဟာ ( တတိယ ကမာ္ဘ ) မှာရောက် နေတယ်ဆိုပေမဲ့
ပုခုံးနှစ်ဘက်ကြားခေါင်းပေါက် ထမင်းစားနေကြတဲ့ လူတွေဖြစ် တယ်။
ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာလဲ ကူညီရိုင်းပင်းတတ်။ထောက်ထားညှာတာ။အားနာတတ်။
စေတနာထားတတ်တဲ့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှု ကို အခြေခံပြီး ကြီးပြင်းလာကြတဲ့
လူ့ ယဉ်ကျေးမှု အခြေခံ ကောင်းပြီသားတွေ လို့ ပြောလို့ ရ ပါတယ်။
လိုအပ်နေတဲ့ အားနည်းချက် တစ်ချို့အခု့ က စပြီး ကြိုးစားပြင်ယူ လိုက်မယ်ဆိုရင်
မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာအားမနားတမ်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါလို့ ဒီဖိုရမ်က နေ
နိုင်ငံခြားသားတွေ/ သူများတိုင်းပြည်တွေ ကို အထင်မကြီးပေမဲ့လဲ
တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေမှာ ကျမတစ်ယောက်ထဲ
နိုင်ငံကြီးသားပီသနေယုံနဲ့ မရဘူးလို့လဲ ယူဆမိတာကြောင့်
ဒီဖိုရမ်ကို စရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
လိုက်လုပ်ပါလို့တော့ မပြောလိုပေမဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်လို့တော့ မြင်မိပါတယ်။
ကျမ ကိုယ်တိုင်လဲ ၁၉၉၆ မှ့ စလို့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်/ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့
တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံတွေ ရောက်ဘူး။မြင်ဘူး ရာကနေ
ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေကို အတု့ ယူသင်ယူ သင့် သလဲ ဆိုတာကို သိလာ။လေ့လာ။ခဲ့တာပါ။
ကျမလဲ ဒီလို အပြု အမူတွေကို၁၉၉၆ ကထဲက စတင်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ဒီဖိုရမ်ရဲ့အစမှာ ကျမချစ်တဲ့။ စာဖတ်သူများလဲ ချစ်တဲ့
ကျမတို့ အမိမြေကြီးရဲ့အလှတရားတွေ ကို အရင်တင်ပြထားတာပါ။
( ဒါတောင်တင်ပြချက်တွေ လိုရင်လိုနေမယ်၊ )
ကျမတို့ရဲ့အမိမြေကို စာဖတ်သူများချစ်သလို ကျမလဲ တကယ်ချစ်တယ်။
ကျမတို့ရဲ့အမိနိုင်ငံသားတွေကို လူတိုင်းက အားကျချီးကျုးခံရစေချင်တယ်။
ဒီလောက်လှပတဲ့ အမိမြေကို မျက်နှာမှာ သနပ်ခါး၊ပေါင်မှာ သေးကြောင်းအပြည့် နဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ် ( KEEP YOUR
CAMPUS CLEAN ) ။
ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက် ( တိုတက် ) နေတဲ့ ကျမတို့ ( တတိယ ကမာ္ဘ )
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း / ကမာ္ဘ ကြီး ဟာရွာဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ
အမျိုးသားတွေ ဂျင်းဘောင်းဘီ တို/ ရှည်။ အမျိုးသမီးလေးတွေ (zero quarter/ mini
skirt ) ပေါင်တို တွေ ဝတ်
နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်း ခေတ်မီစွာ ဝတ်စားဆင်ယဉ်လာကြတာကို တွေ့လာကြပါပြီ။
shopping center ပေါ်တီကို ရှေ့ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့ ပေါင်တို ဝတ်ပြီး လာတဲ့
တစ်ချို့ဆိုရင် bus car စီးပြီး တောင် သွားရဲ ကြတာ အတွင်းခံကအစ ပေါ်နေ
( ဖေါ်ရဲတဲ့ လူကဖေါ်၊ကြည့်ချင်တဲ့ လူကကြည့်၊
သူ့အလုပ်သူလုပ်.ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ရုံဘဲ )
ဒါဆိုရင် ရှင် က ကော ဘွားတော်ကြီးလား။ ထမိန်/ ထိုင်မသိမ်း ဝတ်နေတဲ့
မထင်နဲ့နော် ။ မှားသွားမယ်။
bikini ကို two pieces မှ့ ဝတ်တာ။ ဂျီစရင်း နဲ့ ဘောင်းဘီ ချက်ပြုတ်ဆိုတာ ၊ကျမ
ဘရာဇီယာ less နဲ့ တောင်လျှောက်လည်သွားခဲ့တာ
သူတို့ ဆီမှာအမျိုးသမီးတော်တော်များများဒီ အတိုင်းနဲ့
ဖေါ်ချင်သလောက်ဖေါ် ။ဘယ်လောက်လှလှ ။ ဘယ်ယောက်ကျားမှ့ သမင်လည်ပြန် နှစ်ခါပြန်
သိပ်ပေါ်များနေတော့ မဆန်းတော့ဘဲ ရိုးအီသွားတဲ့ သဘောရယ်။
အလကားရတိုင်း မျက်စိအဆာမကျွေးတာရယ်။ )
သူ့နေရာနဲ့ သူ ၊ဧည့်ခံပွဲလား။ ညစာစားပွဲလား။ဘာသာရေးပွဲလား။ အသုဘလား။
နေရာအလိုက်ရွေးချယ်ဝတ်စား smart ကျနေဖို့ ယောက်ကျား၊ မိန်းမ လိုအပ်ပါတယ်။
အဓိကပြောချင်တာက ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုကို ရှုံချကန့်ကွက်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ခေတ်မီစွာ ဝတ်စားတတ်သေးရင် ခေတ်မီတဲ့ နေထိုင်မှုတွေ။အမူအကျင့်တွေက ကော
အတွေးအခေါ်ညဏ်ပညာတွေလဲ လူ တန်းစေ့ ။ဝတ်တာစားတာလဲ ခေတ်မီ ရင်
ဘာဖြစ်လို့ ကျမတို့ ဝတ်ဆားဆင်ယဉ်မှုတွေ ပြောင်းလဲလာကြလဲ။
ဟုတ်ပြီ။ အားကျလို့ အတု့ယူတယ်။ ဒီတစ်ခု့ ထဲကိုဘဲ အားကျမှာလား။ ကျန်တာတွေကိုကော
ပေါင်တိုဝတ်တတ်ယုံ။ အရက်။ဆေးလိပ်။ဘီယာ ။နဲ့ ကလပ်တက်တတ်ယုံ လောက်ဘဲ ဆိုရင်တော့
(အလကား သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင်။ အမောင်တောင်မှန်းမြောက်မှန်း မသိတဲ့
ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှု တစ်ခု့ ထဲ ခေတ်မီ တို တက်နေလို့ မရဘဲ
နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင် တန်းနိုင်အောင် လုပ်ဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိ ပါတယ်။
မြန်မာ့ကြေးမုံလေးရေ မြန်မာနိုင်ငံကို ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီနိုင်တော်ကြီးံဖြစ်အောင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများက နိုင်ငံရေးဦီးတည်ချက်(၄)ရပ် စီပွားရေးဦးတည်ချက်(၄)ရပ် လူမူရေးဦီးတည်ချက်(၄)ရပ် တို့နဲ့ချမှတ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ် ……..
ဟုတ်ပါတယ်။ကြေးမုံကိုကျွှန်တော်ထောက်ခံပါတယ်။လူတွေမပြောင်းလဲဘဲနေရင် ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။စကားတစ်ခုရှိပါတယ်” မင်းရဲ့တောင်ပံတွေကိုဖြန့်ပြီးမပြန်သရွေ့ မင်းဘယ်လောက်မြင့်မြင့်ပျံနိုင်လဲဆိုတာ သိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့”လူတွေက(ကိုယ်အပါအဝင်)အနည်းနင့်အများတော့အလွယ်လုပ်ချင်ကျတယ်။အမှိုက်ကို အမှိုက်ပုံးဆီမပစ်ဘဲ ဘေးကိုဘဲအလွယ်ပစ်လိုက်တယ်။သက်သာအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။အဲဒီလိုမျိုးလူတွေစုလာရင်ဘယ်လိုမှ သာယာလှပတဲ့နေရာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။လောကပါလတရားထဲမှာ” လူဆိုတာ မကောင်းတာလုပ်ရင်ရှက်တတ်ရပါမယ်”အမှိုက်ကိုစည်းကမ်းတကျမပစ်လည်းမရှက်တတ်ကြဘူး။လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်လည်းမရှက်ကြဘူး။တာဟာကောင်းတဲ့အလေ့အထ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။
Right! မမ မြန်မာ့ကြေးမုံ
ထောက်ခံပါတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာအဲဒီလိုလူတွေများနေပါတယ်။ အရင်ဆုံးစိတ်ဓါတ်ကိုပြင်ရမှာပါ။ တခုခုဆိုရင် ဟိုဟာအပြစ်ပုံ၊ ဒီဟာအပြစ်ပုံပဲ လုပ်ချင်ကြတာပါ၊ ကိုယ်ကိုကိုပြင်ဖို ့ကိုတော့ မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ စည်းကမ်းဆိုတာကိုယ်ကိုတိုင်ကျင့်သုံးရမှာပါ။ အဲဒါကလူတွေရဲ ့စိတ်ဓါတ်နဲ ့ဆိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်မြင့်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကိုကိုပြင်နိုင်ပေမဲ့ ၊ စိတ်ဓါတ်နိမ့်တဲ့သူတွေက ဒဏ်ရိုက်တာတို ့လုပ်ရပါမယ်။ အတော့်ကိုလုပ်ယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်ကြီး အမှန်တကယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ကိုယ်ကိုတိုင် ကျရာနေရာမှတာဝန်ယူနိုင်စွမ်း ရှိရပါမယ်။သူ့ကြောင့်ငါ့ကြောင် ဆိုပြီးလွှဲချနေလို့မပြီးပါဘူး။အားလုံးညီညွတ်မူ၊စည်းလုံးမူ၊ကူညီရိုင်းပင်းမူတွေနဲ့ရှေ့သို့ချီတက်ရန်သာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲနဲ့တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများစည်းလုံးရန်၊ညီညွတ်ရန်၊အင်မတန်ခဲယင်းပါတယ်။မြန်မာတပြည်လုံးမပြောနဲ့ ဟောဒီ မန္တလေး ဂေဇက်ရွာသူ၊သားများစည်းလုံးရန်ပင်မလွယ်ပါ။ကျွန်တော် ဒီကော်မန်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုနုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဘောလုံးကွင်းတကွင်းမှာ တောင်ကိုရီးယားအသင်းနဲ့ ဂျပန်ဘောလုံးအသင်းတို့ဘောလုံးကန်အပြီး TV က တကွက်ပြတယ်၊ ဂျပန်ပရိသတ်ထို်င်သွားတဲ့ဘက်နဲ့ ကိုရီးယားဘက်၊ဒါပဲ၊ဂျပန်တွေထိုင်သွားတဲ့ဘက်အမှိုက်မရှိဘူး၊နောက်ပိုင်းကိုရီးယားတွေသတိထားတာတွေ့ရတယ်။ကျနော်တို့ကော?
အင်း မကြေးမှုံကိုထောက်ခံတယ် လူတွေရဲ့အမူအကျင့်ကိုတော့အာမခံလို့မရဘူး
ဟိုးးးးးးးးးးးအရင်ကလည်းဒါမျိူးတွေဖတ်ဖူးတယ် ကြားဖူးတယ် ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲကြိုးစားလုပ်ခဲ့ကြတယ် ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ထိမပြောင်းလဲဘူး အမ တော်တော်ကြီးပြုပြင်ရမယ်
လူအများစုကြီးကိုတော့ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းနဲ့သာထိမ်းနိုင်တာပါ။
ကားစီတိုင်း အဆင့်ရှိတယ်မမှတ်ပါနဲ့ ခိုးပြီးစီးနေတာတွေများပါတယ်။
ဂေါက်ရိုက်တိုင်း အတွေးအခေါ်ရှိတယ်မမှတ်ပါနဲ့ ဖားထားရှိ၊ခိုးထားရှိ တွေများပါတယ်။
သို့သော် ဂေါက်ကွင်းမှာ ရေဗူးကို ဂေါက်သမားများကိုယ်တိုင်မကိုင်ပါ။ caddyတွေကိုပဲပေးထားတာပါ။ သောက်ချင်မှ “ရေပေး” လုပ်လိုက်တာပါ။
ကုန်လည်း ကိုယ်မသိပါဘူး။ ဗူးခွံလည်း ကိုယ်တိုင် မကိုင် မပစ်ကြပါဘူး။